လာမည့်ဖြစ်ရပ်များ - DutchtownSTL.org
Dutchtown CID လာမည့်ဖြစ်ရပ်များ
ဖြစ်ရပ် 20:6 pm အချိန် @ ပြီလ 00
DT2 နာရီပြီးနောက် UrbanMain Update
ဖြစ်ရပ် 22:5 pm တွင် @ ပြီလ 30nd
ပါဝင္ရန္ DT2 · Downtown Dutchtown ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာရီပြီးနောက်ရပ်ကွက်အတွင်းပျော်ရွှင်နာရီများအတွက်! လာစမ်းပါ အိမ်နီးချင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုစင်တာ သောက်ရန်၊ သင်၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့် Dutchtown တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်။
နာရီပြီးနောက် DT2 အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ - UrbanMain Update
ဖြစ်ရပ် 24:9 pm တွင် @ ပြီလ 30
At သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာ
Dutchtown အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကမ္ဘာမြေနေ့ 365 မှာ cleanup တက်သည်ပူးပေါင်းနေကြသည် Marquette ပန်းခြံ ကမ္ဘာမြေ၏အခမ်းအနားအတွက်! သင့်အိမ်နီးချင်းများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာ အမှိုက်များကိုကောက်ယူပြီး Marquette တွင်အလုပ်များသောရာသီမတိုင်မီပန်းခြံကိုဖွင့်ရန်။
Earth Day Cleanup အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
ဖြစ်ရပ် 27:5 pm အချိန် @ ပြီလ 30
အဆိုပါ Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင် Dutchtown CID ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်ချက်များရရှိရန်အတွက်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည်လစဉ်အစည်းအဝေးများကျင်းပသည် Dutchtown ကော်မတီများ။ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များကိုမဲပေးခွင့်မပြုသော်လည်းအစည်းအဝေးအားလုံးကိုတက်ရောက်ရန်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့် CID အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်ဖိတ်ကြားထားသည်။
Dutchtown CID ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
ဖြစ်ရပ် 5:9 pm တွင် @ မေလ 00
DT2 • Downtown Dutchtown စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များနှင့် Dutchtown အိမ်နီးချင်းများကိုဖိတ်ကြားခြင်းမပြုမီ! Hours မတိုင်မီဒေသခံစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များသည် Dutchtown တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊
HT မတိုင်မီ DT2 အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
ဖြစ်ရပ် 6:6 pm တွင် @ မေလ 00
ဖြစ်ရပ် 11:6 pm တွင် @ မေလ 00
ဖြစ်ရပ် 13:6 pm တွင် @ မေလ 00
ဖြစ်ရပ် 14:1 pm တွင် @ မေလ 00
At Val Community ဥယျာဉ်
၏ဥယျာဉ်မှူး Val Community ဥယျာဉ် အတူတက်ပူးပေါင်းနေကြသည် ဂိတ်ဝေးစိမ်းလန်းစိုပြေရေး နှင့်အခြားစေတနာ့ဝန်ထမ်းဥယျာဉ်ကိုဒီနွေရာသီမှာအကြီးအစမှလွတ်မြောက်ဖို့!
ဖြစ်ရပ် 18:6 pm တွင် @ မေလ 00